Vaovao - Famakafakana ny satan'ny fampiroboroboana ny tsenan'ny indostrian'ny fanamboarana entana amin'ny 2020
Natosiky ny fivoarana ara-toekarena manerantany sy ny fangatahan'ny tsena, ny indostrian'ny entana eto amin'ny fireneko dia nivelatra haingana tao anatin'ny folo taona lasa, ary ny fitomboan'ny tinady dia nitondra ny ankamaroan'ny orinasa mpanamboatra entana amin'ny làlan'ny fampandrosoana haingana. Raha ny fahitana ny maodelin'ny asa fandraharahana dia ny ODM / OEM no maodely indrindra amin'ny tsena fivarotana entana eto an-toerana ary ny rojo indostrialy dia mifantoka amin'ny kojakoja ambony sy ny fametahana afovoany. Raha ny fahitana ny haavon'ny varotra eo amin'ny indostria, ny vola miditra amin'ny varotra an'ireo orinasa natokana ho an'ny kitapo tamin'ny taona 2019 dia 141,905 miliara yuan, fihenan'ny 1,66% isan-taona. Raha ny fahitana ny halehiben'ny tsenan'ny valizy, ny tsenan'entan'ny fireneko amin'ny taona 2019 dia manodidina ny 253 miliara yuan, fitomboana 22,64% isan-taona, ary ny tahan'ny fitomboana dia mialoha ny manerantany. Raha ny fahitana ny fampandrosoana isam-paritra ny indostria, ny indostrian'ny entana ataon'i Shina dia nanjary nalaza indrindra tany amin'ny faritany amoron-tsiraka any Guangdong, Fujian, Zhejiang, Shandong, Shanghai, Jiangsu, ary ny ati-tanànan'i Hebei sy Hunan. Ny indostrian'ny valizy izao dia namorona ny vondrona Huadu, Guangdong, Industrial any Pinghu, Zhejiang ary Baigou, Hebei.
Sina dia mpanamboatra entana lehibe indrindra, ODM / OEM indrindra
Ny valizy dia fitaovana fitehirizana entana matetika ampiasaina amin'ny diantsika isan'andro. Natosiky ny fivoarana ara-toekarena manerantany sy ny fangatahan'ny tsena, ny indostrian'ny valin'ny fireneko dia nivelatra haingana tao anatin'ny folo taona lasa. Ny fitomboan'ny fangatahana tsena dia nitondra ny ankamaroan'ny orinasam-pitaterana ho any amin'ny làlana fampandrosoana haingana. Ny indostrian'ny entana ao Shina dia nanjakazaka tamin'izao tontolo izao, tsy ny ivon-toeram-pamokarana manerantany ihany, fa koa ny tsenan'ny mpanjifa lehibe indrindra eran-tany. Amin'ny maha mpanamboatra valizy sy kitapo malaza eran'izao tontolo izao azy dia manana mpanamboatra valizy an'arivony i Sina ary mamokatra efa ho ny ampahatelon'ny valizy sy kitapo eran'izao tontolo izao, ary tsy azo hamaivanina ny anjarany amin'ny tsena.
Raha jerena ny maodelin'ny asa fandraharahana, ny tsenan'entana an-trano dia mifaninana tokoa, ny maodelin'ny orinasa dia ny ODM / OEM, ary ny rojom-pandraharahana dia mifantoka amin'ny kojakoja ambony sy ny fametahana afovoany. Ireo mpilalao tsena lehibe amin'ny indostrian'ny fanamboarana entana ao amin'ny fireneko dia ny mpanamboatra fanodinana, ny mpanamboatra matihanina ary ny mpandraharaha marika. Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny orinasa entana sy kitapo eto amin'ny fireneko dia mifantoka amin'ny mpamokatra fanodinana. Ny orinasa toy izany amin'ny ankapobeny dia kely amin'ny ambaratonga ary be ny isany, miaraka amin'ny sanda ambany ambany amin'ny vokatra sy ny fifaninanana tsena henjana tokoa. Ireo mpanamboatra matihanina dia lehibe amin'ny ambaratonga, manana R&D sy fahaizan'ny famolavolana, ary mitazona ny vokatra marika ihany koa. Ireo mpandraharaha marika amin'ny valizy dia indrindra avy any ivelany, mahafehy ny R&D, ny famolavolana ary ny varotra mifandraika amin'ireo faratampon'ny tombom-barotra avo indrindra.
Ny fampandrosoana haingana ny tsena, ny tahan'ny fitomboana mitarika an'izao tontolo izao
Raha ny fahitana ny vola miditra amin'ny varotra indostrialy, ny valizy dia iray amin'ireo sokajy ambanin'ny indostrian'ny hoditra lehibe. Raha ny angon-drakitra navoakan'ny Fikambanana hoditra hoditra China, hatramin'ny faran'ny taona 2018 dia nisy orinasa valizy 1.598 teto amin'ny fireneko, miaraka amin'ny fidiram-bola mitentina 150,694 miliara yuan, fiakarana 2,98% isan-taona. Tamin'ny taona 2019, ny vola miditra amin'ny varotra an'ireo orinasa mpanangom-bokatra eo ambanin'ny fitsipika dia 141,905 miliara yuan, fihenan'ny 1,66% isan-taona.
Raha ny fahitana ny ambaratonga ankapobeny amin'ny indostrian'ny valizy dia goavana ny tsenan'ny fireneko ary tao anatin'ny haingam-pandeha tsy nitsahatra tato anatin'ny taona vitsivitsy. Araka ny statistikan'i Euromonitor, nanomboka ny taona 2012 ka hatramin'ny 2019, ny haben'ny tsenan'ny indostrian'ny valin'ny fireneko dia nitombo hatramin'ny 130,2 miliara yuan ka hatramin'ny 253 miliara yuan, miaraka amin'ny taha 9,96% mitombo isan-taona eo ho eo, izay mialoha ny taha-pivoarana manerantany.
Somary mifantoka ihany ny fahaizan'ny indostria, ary miharihary ny sampahom-indostria
Araka ny fizarazaran'ny faritra, ny indostrian'ny entana ataon'i Shina dia nivelatra tamin'ny faritany morontsirak'i Guangdong, Fujian, Zhejiang, Shandong, Shanghai, Jiangsu, ary Hebei sy Hunan avy any afovoan-tany. Amin'ny maha mpanamboatra valizy lehibe indrindra eran-tany azy, ny vokatra enta-mavesatra any Shina novokarin'ireto faritany valo ireto dia mitentina mihoatra ny 80% ny anjaran'ny tsena ao amin'ny firenena. Mifanohitra tanteraka amin'izany, ny fampandrosoana ny indostrian'ny valizy any amin'ny faritra afovoany sy andrefana midadasika.
Raha ny fomba fijerin'ny faritra famokarana, ny fahaizan'ny famokarana an-trano dia miompana indrindra amin'ireo vokatra fanangonana entana telo lehibe ao Shiling any Guangdong Huadu, Pinghu any Zhejiang, ary Baigou any Hebei; Mandritra izany fotoana izany dia teraka ny tsena matihanina toa ny Henting Leather City, Shanghai Hongkou Leather Center, ary ny Guangzhou Leather City. . Ireny toerana fanangonana ireny dia mitentina eo amin'ny 70% amin'ny sandan'ny vokatra any amin'ny fireneko.
Ny angon-drakitra etsy ambony dia avy amin'ny "Tantaran'ny famokarana indostrialy famokarana sy ny fangatahana varotra ary ny tatitra momba ny faminavina ny famatsiam-bola" nataon'ny Qianzhan Industrial Research Institute. Mandritra izany fotoana izany, ny Qianzhan Industrial Research Institute dia manome vahaolana ho an'ireo angon-drakitra lehibe indostrialy, drafitra indostrialy, fanambarana indostrialy, drafitra valan-javaboary indostrialy ary fampiroboroboana ny fampiasam-bola indostrialy.